Doorashada xildhibaanada matalaya Hiiraan iyo Sh/dhexe oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho (VIDEO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Doorashada xildhibaanada matalaya Hiiraan iyo Sh/dhexe oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho (VIDEO)
Kulan wadatashi ah oo ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo odayaasha dhaqanka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ayaa go’aan lagu gaaray in doorashada xildhibaanada baarlamaanka cusub ee matalaya labadaasi gobol lagu soo xulo magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah odayaasha labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe oo ka hadlay goobta uu kalanka ka dhacay ayaa soo dhaweeyay go’aanka guddiga doorashada heer federaal ay qaateen ee ah in doorashada 37 xildhibaan ee labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
“16-ka Oday dhaqameed oo ka mid ah 135-ta ugu jirta labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe, waxay isku raaceen kadib markii la fiiriyay xaaladdo badan oo jira awgeed inay maslaxadda ku jirto in magaalada Muqdisho lagu qabto doorashadii 37 xildhibaan ee ay lahaayeen labadaasi gobol” Sidaasi waxaaa yiri mid ka mid ah odayaal dhaqameedyadda kulanka ka qeyb-galay.
Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer federaal Abuukate Cumar Maxamuud Dhagey oo sidoo kale hadal kooban ka jeediyay goobta uu kulanka ka dhacay ayaa sheegay in dood dheer iyo falanqeyn kadib la isku af-gartay in doorashada xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee u matalaya gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe lagu qabto magaalada Muqdisho.
“Si loo helo tallo mideysan waxaa lagama maarmaan noqotay inaa la-tashi la yeelano Isimadda iyo Duubabka kasoo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe, waxaana ugu dambeyntii isla garanay in doorashada xildhibaanada baarlamaanka cusub ee labadaas gobol lagu qabto magaalada Muqdisho” Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer federaal Abuukate Cumar Maxamuud Dhagey.